प्रचण्डको ओलीलाई प्रश्न : यही कार्यशैलीले दुइटा अध्यक्ष बनाएर के गर्ने ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»प्रचण्डको ओलीलाई प्रश्न : यही कार्यशैलीले दुइटा अध्यक्ष बनाएर के गर्ने ?
प्रचण्डको ओलीलाई प्रश्न : यही कार्यशैलीले दुइटा अध्यक्ष बनाएर के गर्ने ?
By सन्दीप खत्री on ४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०९:३४ समाचार
काठमाडौं: आज बालुवाटारमा बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बैठकमा एकताका विवादित विषयमा छलफल हुने भन्दा पनि शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको एकअर्काकाप्रतिको आशंका मेट्ने प्रयास मात्रै भएको स्रोतले बताएको छ ।
बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेकोदेखि सचिव सरुवासम्म असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार, प्रचण्डले माओवादी नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछि आफूहरुलाई थाहा नै नदिई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सचिव सरुवाबारे पनि माओवादी मन्त्रीहरुसँग परामर्श नै नगरेको र राष्ट्रिय योजना आयोग गठन नै नगरी बजेट निर्माण थालेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रचण्डले ओलीका सामु प्रश्न तेर्साए, ‘यही कार्यशैली हो भने त दुइटा अध्यक्ष बनाएर के गर्ने ? एउटा कार्यकारी, अर्को शेरेमोनियल त हुँदैन ?’ उनले वैचारिक राजनीतिक विषय के गर्ने र महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
प्रचण्डको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले आशंका नगर्न आग्रह मात्र गरेको स्रोतको दाबी छ । उनले केन्द्रीय समितिको भागबण्डा विवादमा ‘समान पनि नभनौं, प्रतिशत पनि नभनौं, आवश्यकताका आधारमा गरौं’ भनेको स्रोतले बतायो ।